Soosaarayaasha Gawaarida - Shiinaha Gawaarida Gawaarida & Shirkadaha
✭ Qeybtaan balaastigga ah waa qeybta ugu muhiimsan ee qeybta hoose ee qeybta xakamaynta iyo isku xirka.
✭Waxyaabaha loo isticmaalay qaybtan balaastigga ah waa Qalabka Dab-demiska ah ee ABS, Qaybtaan balaastigga ah waa qaybta muuqaalka ee badeecada iyo qayb ka mid ah isku imaatin muhiim ah. Waxay si toos ah ugu xiran tahay qolofka dhexe oo leh 6 nuts oo naxaas ah, waxayna u baahan tahay inay ka gudubto 5-mitir oo dhibic dhibic ah.
✭Qalabkan dab-demiska ah ee ABS wuxuu gaadhay heerka V0, isagoo hubinaya nabadgelyada iyo xasilloonida inta lagu jiro dusha sare ee guddiga. Caaryada balaastigga ah ee qaybtan balaastigga ah waxaa sameeya caaryada saddexda saxan ah. orodyahanka qabow barta dhexe, faa iidadaani waxay kadhigi kartaa dhamaan waxyaabaha la isku duro si isku mid ah oo aan si fudud u liidan.
✭Qaab dhismeedka wasakhahaasi la isku duro, nolosheena naqshadeynta waa 500,000 jeer. Isku hagaajinta udhaxeysa alaabada waxaa loogu talagalay lows naxaas ah oo xad dhaaf ah. Lowska naxaasta ah ayaa la gelinayaa caaryada ka dibna la isku duraa. Tani waxay hubineysaa in lowska naxaasta ah uu si adag ugu xirnaan karo qaybta caagga ah.
✭ Tani waa qayb balaastig ah oo xiran gaariga dhexdiisa, iyadoo la isticmaalayo heerkulka sare iyo qabowga u adkaysta PA66 + 30% maadada balaastigga ah. Heerkulka jawiga shaqada ee qaybtani waa inta udhaxeysa -40 iyo +100 digrii. Waxay u adkeysaneysaa cimilada banaanka waxayna la kulmeysaa heerka Volkswagen ee 50185.
✭ Qeybtaan balaastigga ah waa qeyb ka mid ah miirayaasha Saliida Ccessaries caaga macaamiisha Jarmalka. Dhibaatada ugu weyn ee qaybtan ayaa ah in dhumucdiisuna ay tahay 0.45mm oo keliya. Qaab-dhismeedkan qaab-dhismeedku wuxuu qaadanayaa heerka 'HASCO'. Qalabka Core waa 1.2343 (ESR) bir adag oo adag.
✭ Qaab-dhismeedka caaryadu waa mid fudud, oo leh laba qaab dhismeed oo loo yaqaan 'Becu core inserts'. Qalabka wax soo saarka waa PA6 + 30GF, dushana wuxuu u baahan yahay inuu ahaado VDI-24. Badeecada looga baahan yahay saxnaanta cabirka waa +/- 0.05. Waqtiga bixinta caaryada waa 45 maalmood, iyo wareegga duritaanka waa 12 ilbiriqsi. Caaryada ayaa la tijaabiyey laba jeer oo keliya, macmiilkuna wuxuu naga codsaday inaanu diyaarino dhoofinta warshadda wax lagu duro ee Jarmalka.
✭ Kani waa qayb balaastig ah xagal loogu talagalay Volkswagen, iyadoo la adeegsanayo heerkul sarreeya iyo qabow u adkaysta PA66 + 30% walxo caag ah. Heerkulka jawiga shaqada ee qaybtani waa inta udhaxeysa -40 iyo +150 digrii. Waxay u adkeysaneysaa cimilada banaanka waxayna la kulmeysaa heerka Volkswagen ee 50185.
✭ Badeecadani waxaa loo adeegsadaa booska taageerada qaybaha gawaarida si qaybo ka mid ah gaariga looga dhigo kuwo deggan oo lagu kalsoonaan karo. Qaab-dhismeedkan qaab-dhismeedku wuxuu qaadanayaa heerka 'HASCO'. Qalabka muhiimka ah waa 1.2344 (ESR) bir adag.
✭ Qaab-dhismeedka caaryadu waa mid fudud, oo leh laba qaab dhismeed oo loo yaqaan 'Becu core inserts'. Qalabka wax soo saarka waa PA6 + 30GF, dushana wuxuu u baahan yahay inuu ahaado VDI-21. Badeecada looga baahan yahay saxnaanta cabirka waa +/- 0.05. Waqtiga bixinta caaryadu waa 30 maalmood, wareegga cirbadana waa 30 ilbiriqsi. Caaryadu waxay u isticmaashaa INCOE orodyahanka kulul ee orodyahanka qabow ee albaabka hoostiisa. Caaryada ayaa la tijaabiyey laba jeer oo keliya, macmiilkuna wuxuu naga codsaday inaanu diyaarino dhoofinta warshadda wax lagu duro ee Jarmalka.
✭ Qeybtaan balaastigga ah waa qeyb kamid ah baabuurta macaamiisha Faransiiska. Qaab-dhismeedkan qaab-dhismeedku wuxuu qaadanayaa heerka 'HASCO'. Qalabka Core waa 1.2343 (ESR) bir adag oo adag.
✭ Qaab dhismeedka caaryadu waa iska fudud yahay, oo leh laba qaabdhiseyaal. Wax soo saarka waa PA66 + 30GF, oo dusha sare wuxuu u baahan yahay in la safeeyo # 600. Caaryada de
Waqtiga shaqadu waa 35 maalmood, wareegga cirbaduna waa 32 ilbiriqsi. Caaryada ayaa la tijaabiyey laba jeer oo keliya, macmiilkuna wuxuu naga codsaday inaanu diyaarino dhoofinta warshadda wax lagu duro ee Faransiiska.
✭ Warbaahinta miiraha ay soosaartay macmiilku waa iskudhafyo badan oo lakabyo ah oo laga sameeyay muraayadda fiber-ka ama walxaha macmalka ah ee u oggolaanaya is-dhexgalka ugu wanaagsan ee shidaalka noolaha iyo walxaha kaarboonku ku milmay saliidda. Waxay damaanad qaadayaan waxqabadka ugu sarreeya xitaa markay soo bandhigaan saliid «cimri dheer» cusub, wax lagu daro, macdanta iyo saliidaha aan macdanta ahayn iyo hoos u dhaca ku yimaadda. Qaab-dhismeedka warbaahinta shaandheeyeyaasha cusub iyo kuwa dhaqameed waxay xaqiijineysaa faafin sare iyo sidaas darteed khasaaro yar oo xamuul ah oo ku jira nidaamka saliidda mishiinka.
✭ Qeybtaan balaastigga ah waa qeyb ka mid ah miirayaasha Saliida ee caag ka sameysan macaamiil Talyaani ah. Qaab-dhismeedkan qaab-dhismeedku wuxuu qaadanayaa heerka 'HASCO'. Qalabka muhiimka ah waa 1.2344 (ESR) bir adag. Qaab dhismeedka caaryadu waa mid fudud, oo leh afar qaybood oo madaxbanaan. Qalabka wax soo saarka waa PA6 + 30GF, dushana wuxuu u baahan yahay inuu noqdo VDI-33. Waqtiga gaarsiinta caaryada waa 40 maalmood, iyo wareegga duritaanka waa 38 ilbiriqsi. Caaryada ayaa la tijaabiyay laba jeer oo keliya, macmiilkuna wuxuu naga codsaday inaanu diyaarino dhoofinta warshadda wax lagu duro ee Talyaaniga.